Miorimivalana – Fenoarivo Atsinanana: mihorohoro ny mponina, manjaka ny vonoan’olona | NewsMada
Miorimivalana – Fenoarivo Atsinanana: mihorohoro ny mponina, manjaka ny vonoan’olona
Kaominina ambanivohitra anisan’ny manana vokatra lafo vidy toy ny jirofo sy lavanila ary vary ny ao Miorimivalana anatin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana fa saingy saro-dalana sy tsy mandry fahalemana ary hanjakan’ny kolikoly sy ny tsindry amina jeneraly am-perinasa ireo mahavanon-doza sy mpanao asan-dahalo… Araho ny fanadihadiana.
Tsy misy mpihaino ny fitarainan’ireto niharam-boina vokatry ny tsindry sy hosoka ary kolikoly heverina ho niseho teo amin’ny zandary sy ny fitsarana. Miantso vonjy amin’ny mpiaro ny zon’olombelona CINHD ny mponina mahatsiaro ho tany lavitra andriana. Ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, manjaka ihany koa ny fakana an-keriny ny vola sy ny vokatr’ireo tantsaha mpandraharaha. Ho an’ny mponina amin’io kaominina io dia lanjaina entina an-tongotra ny entam-barotra raha ho any Vohilengo izay atao dia an-tongotra 80 km. Ny fokontanin’Ambatoharananakely fotsiny aloha dia efa nisehoana fitsaram-bahoaka raha nahatratra dahalo mpangalatra lavanila roa lahy ny fokonolona ka tsy namelan’izy ireo raha tsy tapitra ny ain’ireto malaso ireto, ny taona 2018. Nalevin’ny fokonolona tao anaty lavaka iray izy roa lahy taorian’izay. Na teo aza anefa izany, tsy mitsahatra hatrany ny halatra jirofo sy lavanila ary indrindra ny fanafihana mpandraharaha manana vokatra ka nahatonga ny fokonolona nitaraina tamin’ny filoa Rajoelina nandritra ny fitsidihany tao Vohilengo, ny 22 mey 2019 lasa teo. Nilaza ny filoham-pirenena tamin’izay fa hametrahana mpitandro filaminana ao Vohilengo ary hisahana ny kaominina ambanivohitra manodidina saingy tsy mbola nahitam-bokany izany ankehitriny raha ny fijaliana iainan’ireo mponina any an-toerana.
Hasarotam-piaro nivadika vonoan’olona feno habibiana…
Nandritra ny fandalovana nandritra ny roa andro, ny 17 sy 18 janoary lasa teo, no nahafahana nanao fanadihadiana momba ny fitarainan’ny fokonolona manoloana ny fahafatesan-dRamatoakely Rasoa Violette, 18 taona izay nitondra vohoka efa-bolana. Maty nisy namono tao amin’ny fokontany Ambodiovotra izy ny alin’ny 16 novambra 2019 tamin’ny misasakalina. “Tamin’ny 16 novambra 2019 dia nanao tambiron’omby nisangotra jirofo andriamatoa Tody Seraphin, olona anisan’ny manana tanin-jirofo betsaka indrindra ao Ambodiovotra ka nisy teo amin’ny 150 ny olona nanoina ny antsony. Taorian’ny fisamongorana jirofo tany anaty ala dia nitohy tamin’ny fanalana pikon-jirofo izany ny alina ka teo indrindra no niresaka teny an’elakela-trano i Flaide sy Violette ary hitan-dRasoana vadin’i Flaide sy Krisy izany. Nandositra niala teo i Flaide ary nodarohan-dRasoana sy Krisy tamin’ny vato sy hazo teo i Violette ka vaky ny lohany. Nandositra ireo nahavanon-doza, niezaka nikiakiaka kosa i Violette ka nisy namonjy sy nitondra azy teny an-tranon-dray aman-dreniny tamin’io alina io. Nandritra izany indrindra, nilaza izy fa Rasoana sy Krisy no nidaroka azy talohan’ny hahafatesany, ny 17 novambra 2019 tamin’ny 11 ora antoandro”, hoy i Kalo Lahady, renin’ilay vehivavy niharam-boina.
Ny maraina mialohan’io fotoana io, nandritra ny fandehanam-behivavy misasa sy mantsaka rano any an-drenirano dia nifampiresaka tamin’i Hasy 15 taona, zandrin’i Violette, Rasoana ary nanontany hoe akory zokinao akao, mangala-badiko dia nopohoko tamin’ny vatobe ny lohany, maharary azy tsara izay”, araka ny firesany tamin’i Hasy tany am-pantsakana.
Nampiasa hosoka sy kolikoly… Niditra an-tsehatra ny jeneraly zandary iray
Ny alatsinainy 18 novambra 2019, nifanatona ny fianakavian’ny nahavanon-doza sy ireo niharam-boina fa hiatohan’ny havan’i Flaide sy Rasoana ary Krisy ny sakafon’ireo olona hiandry faty hatramin’ny fandevenana. Niaiky noho izany izy ireo fa vokatry ny kapoka vato sy hazo teo amin’ny lohany no nahafaty an’i Violette. Vokany, niantoka omby iray sy vary telo kitapo ary kojakoja rehetra ilaina amin’izany ny fianakavian-dRasoana sy Flaide ary Krisy izay natrehan’ny vavolombelona. Nandritra izany kosa anefa tetsy andaniny, anisan’ny nahagaga ny mponina ny fahatongavan’ny zandary hanao fanadihadiana ny anton’izao fahafatesana izao fa nihidy tao amin’ny biraon’ny kaominina aloha ny zandary sy rasazy Raharinomenjanahary Vintana ary ny fianakavian’ny nahavanon-doza raha tsy nahazo niditra kosa ny fianakaviana manamanjo. Rehefa nivoaka tao amin’io fivoriana miafina io ry zareo dia nilaza ilay rasazy mampiteraka hoe “aleveno ny maty fa fiakarana tosidra no nahafaty azy”. Loharanom-baovao voaangona tany an-toerana no nilazan’ny fokonolona fa nisy resa-bola 6 tapitrisa Ar nifampizaran’ny zandary sy ilay ramatoa rasazy tao amin’ny biraon’ny kaominina. Tsy andraikitry ny mpampiteraka anefa izany fa an’ny dokotera, araka ny fanazavan’ilay loharanom-baoavao. Tsy niandry ela fa taorian’ny fandevenana dia nametraka fitoriana teo amin’ny zandary ao Fenoarivo Atsinanana ny fianakaviana ka niakatra tao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny raharaha, saingy tsy nahitam-bokany izany. Raha ny angom-baovao, nisy ny fanelanelanana nataona jeneraly zandary iray am-perinasa izay zanaky ny kaominina Miorimivalana ity raharaha ity. Nohamafisin’ireo nijoro vavolombelona fa izay raharaha mitranga any an-toerana ka ijoroan’ity jeneraly ity dia voaaro avokoa satria ny zandary ao Fenoarivo Atsinanana aza matahotra azy sy mandray ny baikony rehefa misy trangan-javatra miseho ka manelanelana izy.
“Izahay mpitory indray aza no mahazo fandrahonana tao amin’ny zandary Fenoarivo Atsinanana”, hoy ireo fianakaviana. Nohamafisin’ny fanadihadiana lalina natao fa feno hosoka sy kolikoly ary tsindry noho izy tany lavitra andriana ity fokontany Ambodiovotra kaominina ambanivohitr’i Miorimivalana, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ity.
Ny fanadihadiana no nahalalana fa betsaka ny dingana nahatongavan’ny antontan-taratasin’ireo fokonolona ireo kanefa antso an’efitra ihany izany hatramin’izao. Nisy ny fitarainana napetraka teo anivon’ny fibaikoana ny zandarimariam-pirenena Antananarivo izay mitondra fandrasaina azy 5853-Sp/Gn/19 sy ny Seg/Cab1218 ady amin’ny kolikoly ao Betongolo. Eo am-piomanana ny hiakatra aty an-drenivohitra hitondra ny fitarainana eny anivon’ny fiadidian’ny Filoham-pirenena ao Ambohitsorohitra ny fianakaviana.